हा’तहति’यार सहित सेनाको हेलिकप्टर दार्चुलाको छाङरु जाँदै, काला`पानी लिपु लेकको र-क्षार्थ ख’टिने (भिडियो सहित) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/हा’तहति’यार सहित सेनाको हेलिकप्टर दार्चुलाको छाङरु जाँदै, काला`पानी लिपु लेकको र-क्षार्थ ख’टिने (भिडियो सहित)
हा’तहति’यार सहित सेनाको हेलिकप्टर दार्चुलाको छाङरु जाँदै, काला`पानी लिपु लेकको र-क्षार्थ ख’टिने (भिडियो सहित)
काठमाडौं । लिपु`लेकमा नेपाली भूमि अ`तिक्रमण गरेर भारतले तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक बनाएपछि नेपालमा आक्रोश बढेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महा`मा`रीका बीच सडक देखि सं`सदसम्म लिपु`लेकको विषयमा बहस भइरहेको छ ।
तर भारतले नेपाली भूमि अक्रिमण गरेको दार्चुलाको त्यही माथिल्लो क्षेत्रमा बार्षौदेखि सरकारको उपस्थि`ति शून्य छ । काला पानी नजिकैको छाङरुमा स`शस्त्र प्रहरीको बो`र्डर आउट पोष्ट (बी.ओ.पी.) स्थापना गर्ने नि`र्णय भएर पनि अझै कार्या`न्वयन हुन सकेको छैन ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पर-राष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘दु`र्भाग्य नै भन्नु`पर्छ, लामो समयम्म दार्चुलाको त्यो माथिल्लो क्षेत्र, जहाँ सीमा विवाद रह्यो, त्यो ठाउँमा सरकारको उपस्थिति गराउन सकेनौं ।’ अतिक्रमणको एउटा कारण सरकारको कमजोर उपस्थिति पनि भएको उनले बताए ।
अब हेलिकप्टर मार्फत छाङ रुमा सुरक्षा फौज लैजा`ने तयारी भइर हेको मन्त्री ज्ञवा`लीले बताए । ‘अल्टि च्युडका कारण स्थायी प्रवन्ध गर्न समय लाग्ने भएकोले केही समय पर्खिएका थियौं । अब आज भोलिमै स्थायी बीओपी छाङरुमा राख्छौं’ उनले भने ।
त्यसपछि क्रमशः सशस्त्र प्रहरी बलको बटा`लियन नै राख्ने योजना रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार छाङरुमा ११५ र टिंकरमा १६७ गरेर कुल १८२ घरधुरी सौका समुदायका मानिसको बसोबा`स छ । उनीहरुको कुल जन`संख्या ११२० रहेको छ ।
उनीहरु जाडो छल्न दार्चुलाको तल्लो भेगमा झर्छन्, तर अहि ले सम्म घोडेटो बाटोसमेत नभएका कारण पास लिएर भारतको भूमि भएर आउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘यो स्थितिलाई अन्त्य गर्न पहिलो चरणमा घोडेटो र त्यसपछि मोट रबाटो बनाउने सरकारको तयारी छ । त्यसअ नुसार बजेट पनि छुट्याइएको छ’ मन्त्री ज्ञवालीले भने।
सुत्केरी आमा र बच्चाको पेटमा १३ दिनदेखि पानी समेत नपरेपछि रुदै मिडियामा ! अन्तिम अबस्थामा एलिजा पुगिन – भिडियो हेर्नुहोस
विरामी आमालाई अस्पतालको ढोकामा राखेर उनले गु हार मा गिरहे, तर उपचार नपाएरै आमाको भयो मृ’ त्यु